← प्रधानमन्त्री-राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव भेट	जोरजबर्जस्तीका सामु झुक्नु अनुचित २२ दल, के निर्णय गरे २२ दलले ? →	राजधानीका बिभिन्न १८ ठाउँबाट माओवादी प्रदर्शन सुरु	01
दुई घण्टादेखि एकीकृत भएका माओवादी कार्यकर्ताहरु गोंगवु चोकबाट अघि बढेका छन् । हजारौको संख्यामा रहेका माओवादी कार्यकर्ताहरु बसुन्धारा, सामाखुशी, लैनचौर हुदै रत्नपार्क पुग्ने कार्यक्रम छ । धादिङ, नुवाकोट लगायत राजधाीनको उत्तरी क्षेत्रका कार्यकर्ताहरुको त्यहा उल्लेख्य सहभागिता छ । Like this:Like Loading...
← प्रधानमन्त्री-राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव भेट	जोरजबर्जस्तीका सामु झुक्नु अनुचित २२ दल, के निर्णय गरे २२ दलले ? →	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...